Inona ny folder WpSystem? - Faq
Tena > Faq > Inona ny wpsystem - vahaolana maharitra
Inona ny wpsystem - vahaolana maharitra
Inona ny folder WpSystem?
Azoko antoka fa mitovy amin'ny Android izy iolahatahiryamin'ny telefaona Android izay misy angona fampiharana ary mifandray amin'ny Play Store. Ny karatra fitadidiako avy amin'i Lumia taloha dia mananaFolder WPSystemeo aminy ary nanana rakitra arylahatahirymiaraka amin'ny anaran'ny fampiharana. Toa mifandray amin'ny Windows Store izy io. 3.
- Raha toa izany ny biraonao, mila miresaka aho sy ianao. Ary na dia tsy tianao aza izany dia te hifikitra amin'ity lahatsoratra ity ianao satria tadidinao fa nilaza aho fa ny lahatsoratro momba ny fikambanan-taratasy no lahatsoratra nampientana indrindra hitanao hatrizay? Zavatra taloha izany satria fantatry ny rehetra fa mihamangatsiaka ny fifindrana amin'ny analog ka hatrany amin'ny nomerika, koa miorena indray satria ity herinandro ity dia ny fandaminana sy ny fandaminana ireo rakitra ao anaty solo-sainao. Ny fandaminana ny rakitrao solosaina dia sady mora no sarotra kokoa noho ny mandahatra ny antontan-taratasinao tena izy.
Mora kokoa izany satria tsy mandanjalanja na inona na inona ny rakitra solosaina, tsy maka toerana ara-batana izy ireo ka tsy afaka mameno ny latabatrao eo amin'ny toeram-ponenanao izy ireo. Fa sarotra kokoa ny laharana voalohany satria, tsy nampianarina nandamina rakitra solosaina mihitsy izahay. Tsy fantatro ny momba anao, saingy tadidiko ny nandehanako tany amin'ny ambaratonga voalohany, sekoly ambaratonga voalohany ary nanana mpampianatra, hapetrako ao anaty fampirimana misaraka, manana mpiambina mpihaza, zavatra hafa rehetra aho.
Fa raha ny momba ny solosaiko dia tsy nisy olona manodidina hampianatra ahy handamina ny firafitry ny fampirimana, aiza no hitahiry zavatra, na inona na inona ary faharoa, mamorona zavatra betsaka kokoa amin'ny solosaina isika ankehitriny noho ny amin'ny tena tontolo. Manana antontan-taratasy, sary, rakitra mozika maro dia maro isika izay afaka miala amin'ny tanana haingana kokoa noho ny amin'ny tontolo tena izy, ka izany no mahatonga ahy mieritreritra fa zava-dehibe ny mamorona rafitra lojika azo ampiasaina miaraka amin'ireo rakitrao solosaina hatramin'ny voalohany. zava-dehibe noho ny fisie antontan-taratasy satria eo amin'ny tontolo tena izy dia tsy misy izany - tsy mila mandamina betsaka ianao rehefa hitanao fa nahatonga korontana. Fa raha korontana ny solosainanao dia mety manana rakitra an-jatony ao amin'ny birao ianao, ka ho mora ny mahita izay ilainao haingana.
Ary misy fanonganam-panjakana eto, misy lalàna hafa mihatra. Laharana voalohany, ny rakitra tokana rehetra ao amin'ny rafitrao dia tokony ao anaty fampirimana maneho izany tsara, fampirimana manokana. Tsy misy tokony ho eo amin'ny birao ary tsy tokony hisy ao anaty lahatahiry kisendrasendra toy ny antontan-taratasy na alaina.
Ny zavatra rehetra dia tokony ho amin'ny zavatra misy dikany. Fa faharoa, te hanana rafitra ianao izay manamora ny fitadiavana ireo takelaka ireo samirery. Ankehitriny, mety manana lisitry ny lahatahiry lava amin'ny ambaratonga sasany amin'ny rafitrao ianao, fa izany dia hahatonga ny zavatra ho somary mahasosotra, haingana dia haingana.
Fa kosa, te-hanaraka ny dian'ilay filozofa lehibe King Xzibit ianao ary manomboka mametraka fampirimana ao anaty lahatahiry. Antso hoe firafitry ny hazo aho. Rehefa mieritreritra hazo etsy ambany ianao, dia manana ny vatan-kazo, ary avy eo dia mamorona rantsana lehibe io vatan-kazo io, ary avy eo dia tonga sampana kely kokoa.
Ary ity fizarazarana fizarazarana ity dia mitohy hatrany mandra-pahatonganao any amin'ireo ravina. Ary raha izany tokoa, raha mijery akaiky ravina iray ianao, dia ho hitanao fa mitohy ny fizotran'ny rantsana na dia mivoaka avy eo afovoany aza ny lalan-drà. Toa tsy nieritreritra ianao fa hahazo anatomie hazo amin'ity lahatsoratra ity, sa tsy izany? Ary raha mijery any an-kafa ianao, dia ho hitanao fa ny rafitra dia voaverina amin'ny rafitra natoraly sy noforonin'olombelona.
Raiso ny rafi-pandehanan'ny vatanao, ohatra, ny ra rehetra mivoaka avy ao am-po amin'ny alàlan'ny lalan-drà. Avy eo anefa dia mizara ho lalan-drà kely kokoa sy kely kokoa mandra-pahatongany any amin'ny kely indrindra amin'izy ireo, ny capillaries, ary entina mankany amin'ny toerana tena izy amin'ny vatana. Ary ny rafitry ny arabe dia tena mitovy.
Ny teboka roa ao an-tanàna izay ny fomba tsara indrindra hanatratrarana an'io dia ny mitondra fiara voalohany amin'ny làlambe na amin'ny làlambe na amin'ny làlam-be ary avy eo miampita amin'ireo arabe kely sy kely misy mponina. Ny lalan'ny hazo, lalan-dra, ary ny rafi-dàlana no manome ny fomba mahomby indrindra amin'ny fivezivezena; ny firafitry ny hazo dia manome ny fomba mahomby indrindra sy mora indrindra handaminana ny fisie hataonao Te-hamorona ity firafitry ny hazo ity ianao izay manomboka amin'ny antsoina hoe faka. Tena ny vatan'ilay hazo.
Ary ao amin'ny rafitra fisie izay hasehoko anao ho ohatra amin'ny sisa amin'ity lahatsoratra ity, ny faka dia antsoina hoe Google Drive, ary ny anton'izany dia mampiasa Google Drive aho, izay nanova ny anarany ho Google ny iray, ho azy ireo rehetra syncing ny tahiry amin'ny rahona sy ny samy hafa rehetra eo amin'ny ordinatera, fa miresaka momba ny hoe ho kely taty aoriana. Ao anatin'ny lahatahiry fakany, heveriko fa tena misy dikany ny fandaminana ny rakitrao lehibe amin'ny sokajy lehibe amin'ny fiainanao, na rehefa tiako ny miantso azy ireo hoe kovetam-piainana. Ka ny siny amin'ny fiainako dia misy ny oniversite, Geek info, mianatra, ho an'ny tetik'asa fianarana, ny fiainako, ireo dia rakitra nataoko manokana toa ny hetra sy ny firaketana trano, sns.
Avelao aho hanasongadinana fa tsy izany irery no fomba ahazoanao ny Mikarakara hazo fisie ity dia zavatra azo averina isaky ny ambaratonga tsirairay amin'ilay hazo fisie Raha jerenao ny tetikasa filetree datacurator ao amin'ny GitHub, dia hahita ianao fa ny haavon'ny haingon-kazo ambony soso-kevitra dia misy fisie arakaraka ny karazana haino aman-jery, raki-peo, antontan-taratasy, literatiora, lahatsoratra sns. Ary izany dia mitondra ahy amin'ny hevi-dehibe eto.
Tokony hohalavaina ny rakitrao, tokony ho malefaka izy io, tokony hihazona ny lojika rehefa mihitatra. Amin'ny ankapobeny, dia tokony haneho ny fomba fandaminan'ny atidohanao fisie. Ohatra, alaivo an-tsaina hoe ianao irery no olona mampiasa an'ity fampirimana ity satria fantatro fa maro ianareo no miditra amin'ny tontolo matihanina, miasa amina orinasa ary mampiasa lahatahiry zaraina.
Ny filesystem anao dia ahafahanao manontany matetika ny atidohanao, saingy miaraka amin'ny lahatahiry zaraina, mety te hanaraka fitsipika sy fifanarahana nifanarahana ianao. Te-hijery vitsivitsy amin'izy ireo fotsiny aho eto, ny Organise by Category, izay tena ataoko ao amin'ity fampirimana lehibe ity, ao amin'ny hazo fisie, ary io no rafitra tazomiko ho an'ny ankamaroan'ny subfolders koa. Hanome ohatra, aoka ny mandehana mankany amin'ny College Info Geek fampirimana.
Eto no itahirizana ireo rakitra rehetra mifandraika amin'ny orinasako, na ny antontan-taratasin'i LLC na ny thumbnail ho an'ity lahatsoratra ity. Ka raha vantany vao miditra ao amin'ity fisie ity isika dia hahita lahatahiry sasany toy ny Business, Content, Courses, Projects, Speaking and Tools. Ary ao amin'ny fampirimana atiny, raha hiditra lalindalina kokoa isika dia hahita lahatahiry hafa toa ny Lahatsoratra, Lisitry ny mailaka, sary, podcast hijerena ary lahatsoratra.
Ary miaraka amin'io rafitra io, mora ny mahita zavatra tena ilaiko. tena haingana. Ary mba hanomezana ohatra anao fotsiny dia atsipiko eo amin'ny efijery eto ny lalan'ny fisie an-tsokosoko mba hahitanao ny fizotran'ireo dingana mety hataoko hahatongavana any.
Ary averiko indray, mora be ny mahita an'io rakitra io ary ny zavatra hafa rehetra dia tena betsaka. Ny amin'ilay efa nanao hoe: fikarakarana ny teny dia tsy ny hany fomba mandamina ny raki-daza. Ary miditra amin'ny lahatahiry sasantsasany ianao izay misy dikany ny fampiasana rafitra hafa, oh.
B. Arindra amin'ny daty. Ary hitako fa tena mahasoa ity firafitra manokana ity raha ny rakitra ezahiko handamina dia hameno ireo lahatahiry miorina amin'ny sokajy maro samihafa izay hiteraka lisitra lava be.
Ary ohatra tsara ny fianarako amin'ny oniversite. Nandritra ny fianarako teny amin'ny oniversite dia nahazo kilasy 40 isan-karazany aho. Ary koa, afaka fotsiny aho solafaka ny kilasy tsirairay ao amin 'ny oniversite fampirimana fampirimana, izay ho manja mahafantatra ny korontana, aho handeha hamaky ny lisitr'ireo lahatahiry 40 samy hafa isaky ny tsy maintsy mamonjy na hanokatra ny rakitra.
Ary ny tena zava-dehibe, isaky ny semesera rehetra, niditra tao amin'ilay fampirimana tany amin'ny oniversite aho ary nahita antontan-taratasy marobe tsy misy dikany tamin'ny semesera teo aloha. Raha tokony handamina arakaraka ny sokajy fotsiny aho dia tsy namorona ambaratonga hafa amin'ny fandaminana ny zavatra amin'ny taona. Ka manana freshman, sophomore, junior ary senior aho.
Sop Homore, ho hitantsika daholo ireo fampianarana noraisiko nandritra ny taonako faharoa. Avy eo rehefa miditra anaty lahatahiry miorina amin'ny kilasy toa ny Anglisy 313 isika dia mahita ireo rakitra rehetra mifandraika amin'izany kilasy izany, fa koa misy tetik'asa voafaritra tsara, koa raha manana tetikasa ianao fa misy fisie maro samy hafa, heveriko fa mitombina tokoa ny fametrahana ireo Ataovy ao anaty fisie azy ireo ny fisie. Fa ny zavatra rehetra izay toy ny taratasy zaraina ho an'ny kilasy dia tazomy fotsiny ao anaty lahatahiry kilasy. ary ho hitanao mora foana izany raha mbola hitanao tsara ny anarany.
Ary rehefa miresaka momba ny fanomezana anarana ny fisie anao izahay dia izay no dingana faharoa amin'ity fizotrany ity, izay mandeha ho azy ny fizotrany satria hanome anarana anarana rakitra foana ianao, saingy te hiresaka kely momba ny fomba tokony hanomezanao anarana ny rakitrao. Ary tsy mila miresaka be eto isika, satria ny fotokevitra lehibe dia ny tokony hilazana ny antontan-taratasinao ho voafaritra tsara, tokony ho fantatrao indray mipy maso ny dikan'izany ao anatin'ny tontolon'ny toerana misy azy ao anaty hazonao. Ary ampiako ny sainao ity hevitra ity, satria misy mpampianatra hafa mpamokatra sy mpamokatra maro hafa izay manana ireo fivoriambe manonona rakitra be loatra ireo.
Napetrany tao amin'ny filenamez'izy ireo ny daty, napetrany tao amin'ny sehatr'asa rehetra vitany. Ary ny tena marina dia heveriko fa fandaniam-potoana ity satria raha mbola mijery tsara ny toerana itahirizanao ny rakitrao ao anaty fisie ianao dia mila famaritana kely fotsiny ny rakitra tsirairay mba hahafantaranao azy amin'ny indray mipi-maso fotsiny. Ka, mazava ho azy, aza omena anarana ny enti-modinao, fa ny entimodinao fotsiny.docx na taratasy.docx.
Omeo anarana izay mety hitondra ny fitadidianao ny tokony ho izy farafaharatsiny, fa aza manahy ny amin'ny manokana loatra azy koa. Ary izany dia mitondra antsika amin'ny dingana telo amin'ilay dingana noresahiko teo aloha tao amin'ilay lahatsoratra, heveriko fa tokony hampiasa fampiharana cloud sync ianao, toa ny Google One Slash Google Drive ho fakan'ny hazo fisie. Ka raha tsy fantatrao izay atao hoe cloud sync? Ny fampiharana dia fampiasa amin'ny ankapobeny Dropbox, Google One, Microsoft One Drive, iCloud Drive, misy maro hafa koa ao.
Mipetraka amin'ny solo-sainanao ianao amin'ny ankapobeny ary mampakatra ny zava-drehetra manomboka amin'ny fampirimana fampandrenesana mankany amin'ny rahona ary avy eo mampifanindry azy amin'ny solosaina hafa anananao koa. Ary miaraka amin'ny fampiharana amin'ity fomba ity dia manana tombony maro ianao. Laharana voalohany: Ireo rakitrao rehetra dia havaozina hatrany amin'ny rafitrao.
Ka rehefa manova ny rakitra Photoshop na rakitra Word ianao amin'ny solosaina iray, dia ampifanarahana amin'ny rahona sy amin'ny solosaina rehetra anananao izany fanovana izany. Faharoa, azonao atao ny miditra amin'ireo rakitrao na aiza na aiza misy anao. Afaka miditra amin'ny solosainao findainy ianao, manana fidirana amin'ny findainao, mamaky fotsiny ny script ho an'ity lahatsoratra an'ity taolana ity aho, manana fidirana amin'ny solosaina rehetra eto amin'izao tontolo izao ianao raha mbola miditra amin'ny kaonty Google na Dropbox anao. ary afaka misintona ireo rakitra ireo.
Mahatonga antsika hametraka fanontaniana izany: ny fampiharana cloud cloud iza no tokony hampiasainao, iza no tsara indrindra? Handeha aho ary hanolotra ny Google One ho an'ny f na ankamaroan'ny olona. Ankehitriny dia misy mpifaninana marobe any indray, Microsoft One Drive, Box, Sync Dropbox, iCloud Drive, saingy heveriko fa ny Google One dia misy dikany indrindra, laharana voalohany satria manome anao toerana malalaka 15 gigabytes izy ireo, izay mihoatra lavitra noho ny miaraka amin'ireo mpifaninana rehetra. Ary heveriko fa raha tsy mpamorona votoaty, mpaka sary, na mpamorona sary ianao, dia maharitra ela ianao hamenoana ireo toerana malalaka 15 gigabytes.
Ka io no manakana anao tsy handany vola iray taonina eo alohany. Faharoa, miaraka amin'ny mpifaninana tahaka Dropbox, raha mila toerana bebe kokoa, tsy maintsy mifamadika avy hatrany koa ny roa terabyte drafitra ho an'ny $ 10 isam-bolana. Miaraka amin'ny Google One na Google Drive na izay tianao hiantsoana azy dia $ 2 isam-bolana ihany izany ho an'ny 100 gigabytes.
Ary averiko indray, tena tsy heveriko fa ny ankamaroan'ny olona dia mila mihoatra ny 100 gigabytes. Fa ny zavatra ilainao, na iza ianao na iza, na dia tsy mila izany aza ianao dia mila toerana fitahirizana fanampiny taonina mba hahazoana antoka fa voatazona sy voaaro tsara ireo rakitrao. Raha mampiasa rindranasa cloud sync toa an'i Google One ianao dia manana fiarovana amin'ny tsy fahombiazan'ny kapila mafy amin'ny solosaina iray, ka raha ao amin'ilay solosaina iray ihany no anaovako ny rakitra rehetra, dia kapila mafy fotsiny fa tsy mifangaro amin'ny Google. Iray na zavatra hafa, ary midina any amin'ny trano fidiovana io, mety tsy tafiditra amin'ny trano fidiovana izany, fa misy manandrana manery azy hiditra ao amin'ny trano fidiovana na misy mangalatra azy, na i Loki dia mivoaka avy eo amin'ny vavahady ary manoratra ody aminy, azony amin'ny tongony izany ary mandositra ahy izy, sa tsy izany? Ho very ny rakitra rehetra satria ao anaty kapila mangidy fotsiny izy ireo.
mitadiava anaran'ny vondronagroup
Fa rehefa ampifanarahana amin'ny rahona izy ireo dia very ny zava-drehetra rehefa mandositra ity zavatra ity ary mankany amin'ny ankizy matahotra dia ny fitaovana ihany. Ary ity solosaina ity dia azo soloina vola, fa ireo rakitra rehetra ireo dia tsy azo soloina. Ka farafaharatsiny miaraka amin'ny fampiharana Cloud Sync dia manana fiarovana amin'ny tsy fahombiazan'ny Hardware Aga ianao.
Fa ny tsy anananao fiarovana amin'ny olona mpanao ratsy. Raha misy olona miditra ary mankafy azy io dia mamafa ny kaonty Google anao ary mamafa ireo rakitra rehetra ireo, dia manana ianao Tsy manana fiarovana lehibe amin'izany. Amin'ny alàlan'ny Google One sy ny apps cloud sync, azonao atao ny miverina ara-potoana ary mamerina amin'ny laoniny ireo rakitra avy amin'ny Recycle Bin. Matetika, manana fe-potoana 30 andro ianao hanaovana izany.
Fa na eto aza misy afaka miditra sy manafoana ny fako. Na mety nanova rakitra tsy nahy ianao ary tsy tsapanao izany raha afaka iray volana aty aoriana ary fantaro, oh, eny, nila ilay kinova taloha an'io rakitra io aho, ary lasa mandrakizay izy io. Heveriko fa tokony hanana paikady famerenam-bidy mihoatra ny cloud sync ianao.
Ary zarazaraina ho samy hafa ny roa safidy. Ka ny safidy ampiasako manokana ary amporisihiko ho an'ny ankamaroan'ny olona dia ny fampiasana fampiharana backup backup misaraka toa ny Backblaze na CrashPlan. Ary hampiasa Backblaze aho eto satria io no ampiasaiko, fa manodidina ny $ 5 isam-bolana na $ 60 isan-taona dia mamerina tahirin-kevitra tsy misy fetra ao amin'ny solo-sainanao amin'ireo kapila mafy hafa ankoatra ny toa anao Fitehirizana miraikitra amin'ny tamba-jotra.
Fa ny iray kosa dia manome ambaratonga fihenam-bidy. Raha misy miditra ao amin'ny Google Drive anao ka manelingelina azy, na misy mamafa ny rakitra rehetra, dia miverina miverina izy ireo ary Backblaze dia tadiaviko amin'ny toerana maro samihafa. Ity dia karazana mampihetsi-po, fa raha toa ka lavo ny iray amin'ireo data data ireo dia ho faly ianao fa nandray ny fitandremana ary nanohana.
Ny hafa safidy, izay mihevitra aho fa kely tsy matanjaka noho ny tsara rahona nomaniny ho solon'izay, nefa mbola mahasoa vao mahazo kely ivelany fiara mafy,-tsipiriany izany indray mandeha isam-bolana, ary mandika ny angona mba ny iray fiara mafy ary avy eo sy marina avelao hiala amin'ny solosaina io, tazomy amin'ny toerana miafina sy azo antoka. Ary avy eo tadidio ny mametaka azy io indray ary maka backup indray mandeha isam-bolana. Ary izany dia mitondra antsika amin'ny dingana farany amin'ny fizotrany, amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana hitsofohana haingana kokoa amin'ny lahatahiry sy rakitra matetika ampiasaina ao amin'ny rafitrao.
Satria izao no zavatra, rehefa manana ity firafitry ny hazo voalamina tsara ity ianao, indraindray dia manana rakitra enina, fito, valo ambaratonga midina avy ao amin'ny lahatahiry faka. Ary raha mila miditra matetika amin'ireo fisie ireo ianao dia tsindrio ny ambaratonga valo samihafa, ary tsy dia mandaitra. Soa ihany fa azo ampiasaina ny solosaina hamoronana hitsin-dàlana na aliasases.
Ireo dia teny azo ovaina hahazoana fidirana haingana amin'ireo rakitra ireo. Saingy raha ny fahitako azy dia ny mahomby kokoa noho ny hitsin-dàlana aza dia ny fidirana haingana sy ireo faritra ankafizin'ny Finder sy Browse amin'ny Mac sy Windows. Windows dia antsoina hoe Quick Access, azonao atao pin fotsiny ny lahatahiry na rakitra ao aminy eo amin'ny sisiny.
Ary amin'ny Mac OS dia antsoina hoe favourites. ary manome anao ny fiasa mitovy tanteraka aminy, koa raha hitanao ny mpikaroka eto dia ho hitanao fa nametaka lahatahiry maro isan-karazany izay idirako tsy tapaka, ny sasany dia eo maharitra eo, fa ho hitanao koa ireo lahatahiry miresaka azy ireo manondro ny lahatsoratra manokana andehanako ankehitriny. Koa amin'izao fotoana izao ianao dia mijery 172 Computer File fikambanana, satria izany no lahatsoratra miasa amin'ny aho amin'izao fotoana izao.
Noho izany, ampiasao ny Quick Access, manomboka mampiasa ny tianao indrindra, mamorona hitsin-dalana, ary ianao dia ho afaka hamakivaky haingana kokoa ny hazo fisie. Ary raha mbola mitazona ny fahamendrehan'io hazo fisie io ianao, raha mbola mailo hatrany amin'ny fitahirizana rakitra vaovao sy mamorona lahatahiry vaovao, dia tsy ho very rakitra intsony ianao ary ho voalamina tsara kokoa. Mazava ho azy, ny fomba tsara indrindra hijanonana ho voalamina dia ny fieritreretana tsara ireo tetik'asa raisinao, ireo rakitra noforoninao, ny atiny laninao, hantsoina hoe essista.
Tafiditra amin'izany ny hoe mifanaraka tsara amin'ny laharam-pahamehanao sy ny soatoavinao amin'ny fiainana. Ary raha te-hihatsara ianao dia manana tolo-kevitra momba anao ny boky. Essentialism: Ny fitadiavana fifehezana ambany nataon'i Greg McKeown dia iray amin'ireo boky fanatsarana ny tena manokana amin'ny fotoana rehetra, iray amin'ny tena ilaina hitako tamin'ny zavatra niainako manokana.
Ary raha tena te handre maimaimpoana an'ity boky ity ianao dia azonao atao izany amin'ny fandehanana any amin'ny audible.com/thomasor amin'ny alàlan'ny fifandraisanao amin'i Thomas amin'ny 500. soraty -500 amin'ny telefaonao.
Rehefa manao izany ianao, dia mahazo andrana 30 andro maimaim-poana amin'ny serivisy Audible miaraka amin'ny fampidinana audiobook maimaim-poana izay mety ho zavatra tadiavinao. Fa mazava ho azy dia fahazoan-dalana mankany 'Essentialism'. Fa izy io koa dia miaraka amina tany am-boalohany Audible izay tsy azonao aleha amin'ny toerana hafa, miaraka amin'ny fampihetseham-peo, fampihetseham-batana, yoga ary programa fisaintsainana an-taonina.
Ary mazava ho azy, Audible no toerana tsara indrindra amin'ny Internet hahazoana ny tananao amin'ny audiobooks. Izy ireo dia manana tranomboky tsy manam-paharoa an'ny bestsellers rehetra, be dia be ny zavatra tsy mazava ary zavatra avy amin'ny karazana rehetra tianao. Ary manana rindranasa tsara noforonina ihany koa izy ireo miaraka amina endri-javatra mahafinaritra be dia be ao anatin'izany ny timer mandry mba hahafahanao mampiasa azy amin'ny alina, ny fahaizana manampy naoty amin'ny famantaranandro manokana ao amin'ny bokinao, ary ny fifehezana mora foana handosirana na hihemorana raha sanatria ianao te handroso haingana na raha mbola tsy nahazo zavatra ianao dia afaka miverina mihaino azy fotsiny.
Ka raha te hanana fanandramana maimaimpoana mandritra ny 30 andro amin'ny serivisy Audible ianao dia miaraka amina fampidinana audiobook maimaim-poana, takelaka roa azo henoina izay tsy azonao aleha amin'ny toeran-kafa rehetra, ary ireo programa fisaintsainana fampihetseham-peo rehetra ireo, mandehana any amin'ny audible.com / thomas ary midira na mandefasa Thomas amin'ny 500-500 amin'ny findainao Audible dia mivoaka foana satria izy no nanohana ity lahatsoratra ity ary mpanohana be ny fantsoko. Ary misaotra anao mijery koa.
Antenaiko fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity fa mbola tsy nahita an'io. Ary mazava ho azy fa afaka misoratra anarana any foana ianao raha mbola tsy mbola te hanana fampandrenesana lahatsoratra vaovao. Kitiho eo raha mila kopia maimaimpoana amin'ny bokiko momba ny fahazoana mari-pahaizana tsara kokoa.
Na raha mbola tsy nahita ny lahatsoratra farany nataoko momba ny fiaraha-miasa amin'ny namako Matt D'Avella ianao dia hampifandraisiko eto izany. Ka zahao izany rehetra izany.
Inona ny WpSystem amin'ny USB?
WpSystemtsy fampirimana default. Mpampiasa amin'ny milina no namorona azy ary mety ampiasain'ny rindranasa napetraky ny mpampiasa ao amin'ilay masinina. ... Ny karatra SD rehetra /USBAmpidiriko, a 'WPSystem'folder dia noforonina tao amin'ny faka. Google dia toa mihevitra fa ifandraisany amin'ny Windows Phone. REDDIT sy ny Logo ALIEN dia.12 nov 2019
Azo antoka ve ny mamafa ny folder WindowsApps?
WindowsApps lahatahirydia voaarolahatahiryamin'ny rafitra. Tsy mamporisika ny hanaisotra azy izahay satria hisy fiantraikany amin'ny rindranasa napetraka ao amin'ny solosainao.20 mart 2018
- Ka ity misy tranga iray. Efa niahiahy momba ny tsy fisian'ny tsiambaratelo tao amin'ny Windows 10 ianao nandritra ny fotoana kelikely, fa na dia nanandrana ny Linux aza ianao dia tsy afaka manao ilay dingana fotsiny. Angamba rindrambaiko ilainao tsy mandeha tsara, na angamba mpankafy Windows fotsiny ianao, hafa noho ny olan'ny tsiambaratelo.
Inona no azonao atao? Maninona raha hatsaraina? Eny, ry namako, afaka mamaha tanteraka ny olana amin'ny Windows 10 ianao ary manaisotra ireo fako tsy ilaina milanja azy irery. Andao hojerentsika ny fomba nanaovana azy sy ny vidiny. Fa aleo aloha jerena ny vidin'ny mpanohana anay.
GlassWire no fitaovana mampiseho anao amin'ny fotoana tena izy, izay fampiharana mampihena ny fifandraisanao. Izy io dia ampiasain'ny matihanina amin'ny fiarovana mba hanaraha-maso ny malware, manakana ny fantsom-pifandraisana very maina, ary mamantatra hetsika mampiahiahy. Makà fihenam-bidy 25% miaraka amin'ny kaody fanomezana Linus amin'ny rohy eto ambany. (Mozika ambony) Inona no fanatsarana amin'ny fomba rehetra? Eny, araka ny rakibolana dia matoanteny izay midika hoe manatsara zavatra ratsy na tsy mahafa-po kokoa, ary azo antoka fa toa ny tanjon'ny fandresena izany. ho dows fanontana 10 Ameliorated, tetikasa kely efa nisy hatramin'ny 2017.
Tsy dia misy fampahalalana firy izao momba izay tena ao ambadik'izany, fa ny rohy taloha dia manondro an'i Actrons, zazalahy '90 taona izay manonona manokana ny Outtechnology. Siansa sosialy, filozofia, psikolojia ary neurolojia, fandalinana horonantsary sy anime ary fikororohana ho lohahevitra mahaliana. Ny fanontana nohavaozina dia toa fakana sary an'ny script Windows 10 nametraka azy ireo izay saika kilemaina toa ny Windows Update ary nanao fanitsiana tamin'ny Windows Explorer, saingy ny Windows builds dia nivoaka niaraka tamin'ny telemetry lalina kokoa, ka ilaina ny fomba mivantana kokoa hitazomana ny Windows ho any an-trano hiantso mpandatsa-drà sy mahazo ny vaovao rehetra.
Ny fanontana nohavaozina dia nanala ny Windows Update, Cortana, Activation, Microsoft Edge, Windows Media Player, ary ny rehetra. appx UWP fampiharana avy amin'ny fametrahana, tsy tapaka, esorina, tsy misy intsony. Midika izany fa mihena ny haben'ny ankapobeny.
Ny fanesorana ireo singa voarindra toy izany dia mitaky fanolorana solo-javatra amin'ny tranga sasany. Ny famonoana an'i Cortana, ohatra, dia manimba ny menio Start sy ny Fikarohana Windows manokana. Ka Classic Shell no ampiasaina ho solony, ka tsy maintsy milavo lefona koa ianao.
Ny DirectX 12 dia mety tsy ho tohanana tanteraka satria ny Windows Update dia tsy misy resaka ary mazava ho azy fa mijanona tsy misy fanavaozana mandeha ho azy ianao. Raha ny tena izy, ny fizotran'ny fanavaozana dia somary mankaleo ihany, mitaky anao hiala amin'ny Internet, hamerenana vonjimaika ny Windows Update, sns sns. Ampy izay ny milaza fa na dia mifantoka amin'ny fiainana manokana aza ity kinova Windows ity dia tsy dia mifantoka amin'ny fiarovana izany.
Ilay farany nolazain'ny tranonkala fa nesorina ihany ny ankamaroan'ny fampiharana azo trandrahana, ka io teboka io dia mety tsy dia zava-dehibe loatra noho ny fieritreretanao azy. Fa ampy resaka. Maninona isika no tsy mitady ny tenantsika ary mahita hoe inona koa no ilaintsika amin'ny anaran'ny fiainana manokana? Tapitra ve izany, Windows Mail.
Iza no mampiasa Windows Mail? Adala manao ahoana ianao no tsy tokony hampiasa tranokala hijerena ny mailaka anao fotsiny? Tsara Boomer, ankafizo ny Outlook Ka tsy misy Windows Mail, tsy misy Windows Store, ary tsy misy Microsoft Edge, izay rehetra ananantsika eto dia File Explorer, dia izay. Raha ny marina dia mahatsikaritra fanovana vitsivitsy ihany koa aho izao. Aiza daholo ireo lisitra mitete-midina an'ny File Explorer? Mahatsapa izany fa tena ho hafa tokoa.
Manana ny menio Start Start mahazatra ao amin'ny Windows Vista sy 7 -Style ihany koa izahay. Ary mazava ho azy, satria tsy misy ny Edge, Anthony dia nanampy tamin'ny fanipazana hitsin-dàlana Firefox tamin'ny birao. - Ny toerana misy anao dia DuckDuckGo, marina? - Ie. - Ity ve ny fenitra Firefox sa ilay fanontana Windows 10 nohatsaraina? - Tsia, fanontana nohatsaraina ity.
Raha ny marina dia Firefox sy Thunderbird. - ONLYOFFICE. - Inona? I ONLYOFFICE sy mpilalao haino aman-jery VLC dia efa nalahatry ny rafitra miasa avokoa - tsy mbola henoko ny momba an'i ONLYOFFICE - Toa fihaonan'i LibreOffice io - Ha, mitovy be amin'ny Microsoft Office io.
Andao andramo ary mitady torohevitra teknolojia vitsivitsy eto. Torohevitra teknika avy amin'i Linus. Inona ny pejiko Amazon? TITAN X. efa niasa ity.
Eny ary, mila manavao izany isika. Colton! - Eto aho, misy inona? - Oh wow ianao eo? (Lehilahy mihomehy) Tsara be izany. Afaka miantso ny olona amin'ny filazako ny anarany fotsiny ve aho? lttstore.com.
Hey, akanjo tsara tarehy izany ry zalahy. Eny ary, inona no mbola azontsika andramana eto? Eny ary, aiza ny fisie ahy? Velarina? - Ity dia fanovana an'ny Windows Explorer antsoina hoe Old Explorer izay mamerina ny fomba Windows 7 an'ny Windows Explorer. Ka tsy manana ilay fehy nentim-paharazana.
Tsy misy an'izany zavatra hafa izany. Izay vao nosoratana indray. Ary tena misy fisie fisie izay azonao ovaina hanamboarana azy manokana.
Nampiasako azy ireo nandritra ny fotoana kelikely noho ny fahalianana te hahafanta-javatra, saingy nampiasain'izy ireo teto izy io satria nisy fiovana sasany natao tamin'ny Windows koa nisy fiantraikany tamin'ny Explorer. Ka tsy maintsy nampiasain'izy ireo ny Old Explorer mba hanamboarany azy.- Eny, azoko lazaina aminao izao fa zavatra iray ihany no hotandremako, dia izy ireo no manamboatra azy ary amin'izay aho mitady zavatra sy an'ity mandehana folder rehefa manindry folder aho, ry bastards! Tsy izany no tadiaviko fa tiako hiakatra ao anaty folder izany.
Raha tiako hiverina any amin'ny pejy teo aloha io dia hiverina aho. Ny folder dia midika hoe fisie ao anaty firafitry ny lahatahiry. Ka ity dia toa ny menio endri-javatra Windows 10 mahatsiravina, afa-tsy misy zavatra kely kokoa aza eto, betsaka ny mifandraika amin'ny zavatra telemetry, ka ny fanavaozana ny Windows, ny lalao toa ny zavatra Xbox, ny telemetry ary ny Calling home dia mifandray.
Izay zavatra manontany tena dia ho voafafa ihany koa - azoko atao? nametraka écran écran aza? - Izay raha ny hevitro. Miseho izany, sa tsy izany? - Tsy haiko, marina? Andraso, eto, eto, eto aho, manana aho. Ka tsy afaka mitady izany ianao.
Heveriko fa angamba satria nandamina ny fikarohana tsy tapaka ihany koa izy ireo. - Eny, tsy misy an'i Cortana, maty ny Fikarohana Windows .- Ha, tsy fantatro akory fa io saverin-tsarimihetsika bubble io dia mbola natsangana tao Windows.
Ity dia Windows Vista mahazatra eto. Tsara be izany taloha. Ooh, fanafainganana 3D amin'ny birao! Ankehitriny dia toa sandoka izany raha ny tena izy, te hijery ireo bolom-bolo mandritra ny andro maro fotsiny isika - nivoatra nihoatra ny pikantsary ho karazana karazany isika tamin'io fotoana io - hafahafa ihany koa izany, ny takelaka Windows dia tsy mandalo zavatra misy antony.
Ny tabs, nefa nahoana no tsy Windows vakizoro? Okay, mahafinaritra izany. Heveriko fa tsara izany - tsy dia nanao benchmark aho - Okay. - Saingy toa haingana be noho ny fametrahana Windows 10 mahazatra izy io. - Ny tiako holazaina dia mipoitra eo noho eo ny menio fanombohana, izay tena tsara.
Fa ny tiako holazaina dia hoe ratsy inona ity fikarohana ity? Ka andao hitady Counterstrike. Mavesatra izany. Ny tsy fahitana zavatra izay hitsin-dàlana ara-bakiteny eo amin'ny birao dia mahatsiravina.
Tsy ratsy noho ilay iray natsofoka tao amin'ny Windows 10. - Heveriko fa azo atao ny mametraka ny lahatahiry ho an'ny akorandriaka mahazatra na antsoina hoe Open Shell izao. Ka raha tsindrio havanana eo amin'ny menio Start ianao ary mankany amin'ny Settings dia azonao atao ny manamboatra ny zava-drehetra ao, fa raha tsy izany dia tsy namboarina ho an'izay raha ny hevitro.
Ho an'ny menio fanombohana fotsiny. - Azoko, okay. Mikaroha amin'ny Internet, mitadiava programa sy fandaharana, mitady rakitra.
Natao hikaroka ny zava-drehetra tompoko.- Oh. Eny ary, nataoko izany dia tsy miala tsiny amin'izany.
Ka inona indray no azontsika andramana eto? Midika izany fa hilamina ny lalao iray, sa tsy izany? Andao hilalao Doom - Ny tiako holazaina dia hoe tokony ho mihazakazaka ny Doom - Misy teny miafina default, nahoana no tokony ho izany? - Satria ny kaonty mpampiasa nidiranao izao dia mpampiasa mivantana. Tsy mpitantana izany - Fa maninona? - Tsy mandray intsony ny patch patch - Right - Ny ankamaroan'ny fahasembanana amin'ny filaminana dia mitranga satria mpitantana ny mpampiasa. - Marina, ary tena tsy misy antony maharesy lahatra ny ho mpitantana hafa ankoatry ny fametrahana programa fotsiny.
Ary raha fantatrao ny tenimiafin'ny admin dia azonao atao foana ny mampiditra azy raha tianao, toy ny amin'ny Mac.- Eny.- Tokony hifindra amin'ny Mac fotsiny aho. Eo anelanelan'ny Spotlight, ary raha ny marina, dia tsy ratsy izany Finder izany.
Izaho no mandinika azy io .- Misy fomba hafa azonao alaina.Path Finder dia iray.- Okay.- Rindrambaiko voaloa io, nefa tena mendrika izany.- Fa maninona no andoavanao vola amin'ny Mac rehetra? - Ie.- Satria afaka mividy izany ianao dia nividy Mac.
Eny, eny, mihazakazaka amin'ny 90 FPS isika na inona na inona. -Eny, milamina tsara izany.-Ultra-Nightmare.
Raiso ny biby goavam-be. -Nahoana no tsy manandrana lalao DirectX 12 ianao? mety tsy hiasa avy eo eh. Tsara izay --- mety ho.
Nahazo tifitra avy amin'ny Tomb Raider aho. -Oh eny, hanao izany. Oh, hafahafa, tsy misy mipoitra ao anaty fitoeram-bokatra -o.- Ity dia mety ho artifact fotsiny avy amin'ny Shell Shell.
Tsy azoko antoka tanteraka. Naharitra iray minitra mafana, saingy mety tsy hoe tsy manana sary masina miafina isika. - Tsy mahita fomba hanafenana azy ireo aho.
Eo amin'ny toerana misy ahy aho izao ary marina, tsia, afindrao fotsiny izy ireo. Na ireo sary mihetsika mihetsika aza dia samy hafa kely. Ka mety marina ny anao.
Mety ho akorandriaka mahazatra fotsiny io. Andao isika hilalao lalao aloka avy amin'ny Tomb Raider, DirectX 12. Eto isika zazalahy.
Nahoana ny Windows Update no tokony hisy fiantraikany amin'izany? - Toa misy fanitarana ho an'ny DirectX 12 izay midina avy amin'ny Windows Update indraindray. Ka ny hevitra dia, raha manana lalao manana fanitarana izay tsy anananao ianao, ny DirectX 12 dia tsy mandeha araka ny tokony ho izy - Eny, ny Shadow of the Tomb Raider dia lalao efa antitra kokoa ary toa mandeha izany marina farafaharatsiny farafaharatsiny ao anaty menio izay omena ao anaty motera ka hino aho fa hihazakazaka izany. OK.
Ka amin'ny fomba ofisialy DirectX 12 dia tsy mandeha, fa tsy ofisialy, raha manandrana lalao amin'ny lalao ianao dia mety handeha tsara amin'izay.- Eny.- Tsy tokony ho eto ianao, fa tiako izany.
Tonga ny manager vaovao. Mahafinaritra ny mahita. Nahazo ny fampiasanao GPU sy ireo zavatra tsara rehetra ireo, na dia tsy hitako aza ny temps eto, dia miverina indray mandeha farafahakeliny izany - Miorina amin'ny Windows 10 1903 izany - Azoko - Tamin'ny 1909 dia tokony ho azo atao izany, fa ny sary ofisialy dia 1903 .
Eny ary, mety ho hitanao eo amin'ny zorony ambany ankavanana fa manana kisary ianao hampifandraisanao amin'ny mpamosavy internet.- Oh, izaho no.- Eny ary izany no --- Izany dia satria tsy hain'i Windows fa afaka manana Internet aho. fifandraisana.- Mahitsy, satria tsy afaka miantso mody izy io dia tsy afaka.- Takatra.- Ka io ihany no fantany fa manana fifandraisana eo an-toerana ianao.- Mahaliana. Na dia hesorina aza ny telemetry rehetra, dia mbola manohy ihany isika daty tsy maintsy mamitaka an'i Windows aho fa tsy misy antony hampiasana azy satria tsy manana fifandraisana Internet aho - Eny - Oh, Creative Cloud angamba tsy hahalala, manana fifandraisana Internet ihany koa aho - Ie - Oh, aleoko miloka wi rd manome zavatra be dia be izay midina satria mieritreritra izy fa tsy manana fifandraisana Internet ianao - satria tsy afaka ping ny mpizara azy ireo.
Tsy afaka miantso an-trano ianao - noho izany dia mamono telemetry ho an'ny rindranasa hafa koa - Heveriko fa Adobe dia iray amin'ireo rindranasa izay miditra amin'ny Windows API noho io, ary ny API mihitsy no nesorina. - Nanokatra ny birao Creative Cloud aho. Misy kinova vaovao azo.
Mandrosoa ary manavao. Andao hojerentsika raha mahazo azy io. Andao hojerentsika raha afaka mahazo tavoahangy rano amin'ny lttstore.com ianao.
Eny ary, tsy hifarana ity. Efa nipetraka efa an-taonany maro teto - averiko daholo izay nolazaiko momba ny rindrambaiko Adobe avo lenta. - Eny ary, manana izany isika, toy ny mpitantana ny lahasa.
Wow, tena tsy dia misy loatra ao - eny, ary mifanaraka amin'ny fanahin'ny OS, nampiasa NVCleanstall koa aho hametrahana ny mpamily NVIDIA. Ka tsy manana afa-tsy ny kely indrindra faran'izay kely indrindra amin'izany ihany koa isika. - Oh, heveriko fa izany no manazava ny antony mahatsapa fa haingana dia haingana.
Araka ny fantatrao, indraindray na amin'ny solosaina haingana aza ianao dia manokatra kapila mafy C eo an-toerana ary maharitra 10 na 15 segondra tsy misy antony mazava. Mila manavao toy ny hazo any afara izy io, izay mila mandeha - Tena marina. - Ao amin'i Microsoft sy ireo banga rehetra ireo.
Manontany tena ianao hoe ohatrinona ny entana no voahidy ao amin'ny kinova vanila an'ny Windows. - Tsy misy vazivazy, toy ny hoe mila fanindroany aza ny fanokafana sy famenoana lisitra lahatahiry, mila segondra fa tsy 10 segondra.- Eny, ny fidirana amin'ny vault na iray amin'ireo mpizara hafa mazàna dia maharitra ela.- Elaela.
Tsara izany na dia eo am-bola aza aho izao ary mamaly tsara izany raha mandinika ny fihodinana noho ny fifandraisana gigabit - eny - hey, MS Paint mbola eo - MS Paint dia tsy misy Spyware.- Fantatro fa fantatro fa tsara ianao rehetra. Tena tsara izany raha avy amin'ny kinova Windows ofisialy azo alaina ofisialy toy ny kinova voarakitra izay tena niresaka momba ny nanaovanay lahatsoratra momba ny Windows 9, ary bebe kokoa satria tsy misy intsony ny telemetry.
Fa raha ny fahitana azy ara-dalàna dia faritra volondavenona daholo io, raha lazaina. Araka ny tranokala, ara-dalàna tanteraka izao ny tetikasa, mifototra amin'ny EU Directive 2009/24, izay manome anao fotodrafitrasa mifandraika amin'ny alàlan'ny fampidinana sary miaraka amin'ny telemetry, ao anatin'izany ny fampidirana, avy amin'ny tranokala mihitsy, na dia piraty aza ianao. Na izany aza, azo atao ara-dalàna izany raha manova sary Windows ho anao ianao, ary manana antontan-taratasy feno momba ny fizotrany izy ireo, ary koa tahirin-kevitra momba ny lozisialy open source izay omen'izy ireo alalana ary ny fampidinana Windows 10 1909 dia tokony hataon'izy ireo irery. na dia ny sary talohany aza dia miorina amin'ny 1903.
Ankoatr'izay dia ara-dalàna, ny fampiasana sary Windows toa an'ity dia tsara ho an'ny olona te-hihazakazaka azy amin'ny VM amin'ny masinina Linux ohatra. Ho an'ny fampiasana andavanandro tsy haiko. Raha tsy mila ny sasany amin'ireo zavatra hitanay fa tsy dia mandeha tsara izy ireo, ary raha tsy mampaninona anao ny mitsambikimbikina amin'ny tadivavarana sasany manandrana manavao na mihazakazaka zavatra mitaky alalana amin'ny fitantanan-draharaha dia mazava ho azy, ny anay ny tolo-kevitra tsara kokoa dia ny manome sy mihazakazaka Windows na mihazakazaka Linux fotsiny raha mila fiainana manokana ianao nefa tsy misy sakantsakana.
Raha miresaka momba ny tsy misy fihenjanana amin'ny faritra miafina anao, MANSCAPED dia mahatonga ny manscaping ho azo antoka sy mora amin'ny kitapo Perfect 3.0 azy ireo. Izy io dia misy mpamono rano, mpanamory vatana avo lenta ary vokatra azo avy amin'ny rano ho an'ny lehilahy.
Ary rehefa misoratra anarana amin'ny drafitra momba ny fidiovana faratampony ianao dia hahazo famenoana ny vokatrao isaky ny telovolana ny vokatra MANSCAPED ankafizinao sy ny vokatra fanoloana ireo blades dia atolotra mivantana eo am-baravaranao tsy misy olana. Esory fotsiny ny lohan'ny lozanao ary soloinao vaovao isaky ny volana vitsivitsy mba hahazoana antoka fa hahazo ny fiharatana madio indrindra ianao. Ny fonosanao fenoina dia omena fanomezana maimaimpoana foana.
Ary amin'ity volana ity, zahao ny $ 30 Foot DusterpH Control Foot Deodorant Spray, maimaim-poana tanteraka. Tsidiho fotsiny ny manscaped.com/TECH raha tsy ny 20% amin'ny kitanao Perfect Package miampy fandefasana iraisam-pirenena maimaim-poana any Etazonia, Kanada, Aostralia ary UK.
Raha nankafizinao ity lahatsoratra ity, azafady mba jereo ny lahatsoratra ananantsika eto ambanin'ny Windows 9. Tetikasa tena mahafinaritra ihany koa izany ary mendrika jerena.
Ahoana no hanesorako ny folder Modifiablewindowsapps?
Ampidiro amin'ny maody azo antoka,esoryny manafintohinalahatahiry, avy eo avereno indray. Toa mety ho alahatahirynapetraka raha nametraka lalao Microsoft ianao. Hanome anarana azy indray aho teo alohafamafanana izany aza, ary alao antoka fa mandeha tsara ny zava-drehetrafamafanaizany.
Androany isika dia hamafa ny fizarazaran-tsolika ao amin'ny Windows 10 izay toa tsy azo esorina. Ireo fizarazarana ireo dia azo antsoina hoe fizarana fanarenana na fizarazarana OEM, saingy manana zavatra iraisana izy rehetra: voaaro indray izy ireo ka tsy afaka mamafa ny fitaovana sasany ao amin'ny Windows. Mazava ny soritr'aretina rehefa mijery kapila mafy amin'ny fampiasana Windows Disk Management ianao.
Hanombohana ny fampiasana, tsindrio fotsiny ny bokotra Windows ary safidio ny Disk Management. Avelao aho hisintona an'ity mba hahafahako mampiseho anao eto amin'ity zoron'ny birao ity. Manana kapila mafy roa misy ny 0 sy 1 izahay.
Ny partitions tiako hamafana dia amin'ny kapila mafy 0 izay mampiseho fizarana dimy. Raha tsindrio havanana ny iray amin'ireo safidy ireo dia ho hitanao izay safidy azo alaina ao amin'ny menio ny toe-javatra. Amin'ity fizarazarana voalohany ity dia mazava ho volondavenona ny Delete Volume.
Raha ny marina, ny safidy hamafana dia tsy miseho akory raha tsindrio havanana amin'ny manaraka aho. Ny fizarana faharoa, fahatelo ary fahefatra dia manana safidy tokana. Ny fahadimy dia manome ahy safidy hamafana azy, ka izany no hataoko.
Mariho fa tsy ny amin'izao fotoana izao Windows startup fisarahana, izay eo kapila 1. Izao no tranainy raha ny marina Windows fiara mafy fa te-hamafa mba afaka mampiasa azy io ho toy ny fitahirizana fiara faharoa. Himenomenona izy fa efa ampiasaina io, saingy afaka mandroso sy mamafa azy aho satria kopian'ny Windows fotsiny io.
Tao amin'ny lahatsoratra navoaka teo aloha, nasehoko anao ny fomba fandefasana kapila mafy amin'ny kapila SSD azo ampiasaina amin'ny Windows. Fafao fotsiny ireo fizarazaran-tsoka amin'ny kapila mafy mba hahafahako mampiasa azy ireo ho tahiry faharoa. Manome antsika fizara efatra sisa tsy afaka mamafa ny Disk Management.
Ny vahaolana dia ny fampiasana rindrambaiko baiko namboarina ao amin'ny Windows antsoina hoe diskpart. Andao handeha any amin'ny bara fitadiavana isika ary soraty amin'ny 'cmd' izay averina avy hatrany ny baiko. Tsindrio havanana eo aho ary hotanterahiko ho mpitantana.
Avelao aho handroso kely ity mba hahitantsika ny zava-mitranga sary eo amin'ny efijery DiskManagement. Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mihazakazaka diskpart, voasoratra d-i-s-k-p-a-r-t. Fitaovana zotram-baiko ho an'ny fizarazaran-kapila, ary amin'ny alàlan'ny fanoratana ny 'list disk' ary avy eo ny fanoratana dia mahazo ny lisitry ny kapila ara-batana rehetra ao amin'ny solosaina isika.
Azonao atao ny mahita fa ny disk 0 sy 1 dia mitovy amin'ny 0 sy 1 mitovy ao amin'ny Disk Management. Mila mifidy ny kapila mafy misy ny partitions tiana hamafana isika izao. Satria ny tsipika baikon'ny baiko dia tsy misy mpampifanaraka sary, mila manoratra 'select disk 0' isika hisafidianana azy.
Rehefa tanisiko ny kapila mafy indray dia hahita asterisk eo akaikin'ny kapila mafy 0 ianao, izay manondro fa voafantina izy ary vonona izahay hanao fandidiana eo amboniny. Andao hataontsika lisitra ireo fizarazaran'ity kapila ity amin'ny alàlan'ny fanoratana 'listpartition'. Azonao atao ny mahita fa nitanisa fizarana dimy izahay na dia tsy mampiseho afa-tsy efatra aza ny DiskManagement.
Ny fizarazarana 2 dia tsy hita, izay midika fa tsy vitan'ny tsy voafafa io, fa miafina ao amin'ny Disk Management ihany koa. Tena kely voatokana fisarahana fa Windows nahary, fa te-hamafa izany koa. Averina indray, sahala amin'ny nisafidianantsika kapila mafy, mila misafidy fizarazarana isika.
Raha tanisainao indray ny fizarazarana dia ho hitanao ao amin'ny asterisk ny safidinao. Misy fanafohezana ny teny hoe 'fisarahana'. Azoko atao ny manoratra ny 'lisitra fizarana' ary mitovy amin'ny 'list partition' ka noho io teboka io dia mampiasa 'part' aho fa tsy 'partition'.
Aorian'ny fisafidianana ny fizarazarana 1 dia mila mamafa azy isika. Tsindrio fotsiny ny 'hamafa ny ampahany' ary hiditra ny enter. Na izany aza, satria fizarana voaaro izy io, tsy hahomby ny famafana.
Ny mila ataontsika dia ny manorata 'mamafa part' ary avy eo ampio ny tohan-kevitra 'averimberina' ary tsindrio enter - ary izany tokoa no hamafana ilay fisarahana. Azontsika atao ny manamarina izany ao amin'ny Disk Management izay misy ny fizarazarana voalohany ankehitriny. Andao lisitra indray ireo fizarana ary ho hitantsika fa efa tsy eo intsony ny fizarazarana 1.
Andao hifidy ny fizarana 2 ary andramo ny mamafa azy amin'ny 'Delete Part'. Tsy mahomby intsony izy satria voaaro ka mila manoratra amin'ny 'Delete part override' aho. Ankehitriny dia raharaha fotsiny ny fisafidianana ireo fizarana sisa tavela amin'ny sainam-pirenena diso ary hamafana azy ireo.
Andao 'Safidio ny Fizarana 3' ary 'Delete ny ampahany diso'. Safidio ny fahefatra ary hamafa azy. Ary farany 'Safidio ny Fizarana 5' ary mamafa ny fizarazarana.
Raha tanisiko ny fizarazaranay dia tsy eo intsony izy rehetra. Rehefa mandeha any amin'ny Disk Management ianao dia ho hitanao fa tsy mamaly izany satria tsy tianay ny manandrana mamafa zavatra amin'ny dingana hafa. Ka tsy maintsy miala amin'ny fangatahana aho, manery azy hanidy, ary avy eo hamerina ny fitantanana Disk.
Azonao atao ny mahita fa ny Disk 0 dia afaka amin'ny fizarazarana rehetra, miaraka amin'ny habaka tsy misy toerana manerana ny kapila mafy. Amin'ity fotoana ity dia afaka mamorona voloko sy fizarako manokana aho ary lohahevitra famolavolana izay tiako matetika. Manantena aho fa nankafizinao izany - misaotra nijery!
Inona ny folder wpsystem ary mankaiza?
Inona ny Wpsystem Folder ary aiza no alehany WpSystem dia tsy fampirimana default. Nisy namorona ny mpampiasa eo amin'ny milina sy azo inoana hoe nampiasa ny nametraka taratasy fangatahana nataon'ny mpampiasa ny milina.
Azo antoka ve ny mamafa ny wpsystem amin'ny Windows 10?
avy amin'ny fahalalako ahy fa tsy nahy namindra ilay fampirimana aho, wpsystem dia ampiasaina miaraka amin'ireo fampiharana fivarotana windows. ny famindrana ny fampirimana dia nahatonga ny fampiharana ahy (halo app sy halo 5 forge ho voafaritra tsara) hianjera avy hatrany aorian'ny fandehanana. Amin'io fampahalalana kely io, ny fanesorana WpSystem dia tsy azo antoka raha ny hevitro. Nahavaha ny olanao ve izany?
Inona ny wpsystem folder-age an'ny Empires HD?
WpSystem dia tsy fampirimana default. Mpampiasa amin'ny milina no namorona azy ary mety ampiasain'ny rindranasa napetraky ny mpampiasa ao amin'ilay masinina. Manolo-kevitra ny handray ny fananana ilay fampirimana aho ary mamindra ny fisie fotsiny. @Ramhound ity folder ity dia noforonin'i Age Of Empires HD.